“TV Duqoobay oo Todobaatameeyadii ah ayaa noo yiilay Guriga, Aabahey ayaa Anteenada ku raadin jiray Kanaalada, Xaafada oo dhanna way…”. – Gool FM
“TV Duqoobay oo Todobaatameeyadii ah ayaa noo yiilay Guriga, Aabahey ayaa Anteenada ku raadin jiray Kanaalada, Xaafada oo dhanna way…”.
(Europe) 15 Maajo 2018. Dani Alves ayaa dhaawac ku seegi doona Koobka Adduunka ee June lagu qaban doono dalka Ruushka.
Wiilka reer Brazil ayaa dib u eegay oo ka sheekeeyay Koobkii adduunka 1994 uu ku guuleystay xulkiisa markaa uu 10-sano jir ahaa.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay Nolosha adag uu ku soo karay daafacii hore ee Barcelona iyo Juventus iminkana ka tirsan PSG.
“Waxaan kici jiray shanta subaxnimo si aan Aabahey uga caawiyo inuu dawooyinka Kiimikada ugu shubo beerteena, intaa kaddib Baaskiil ayaan u kaxeysan jiran Iskuulka oo inoo jiray 10km,” Alves ayaa sidaa yiri.
“Dad badan ayaa ii sheegay inaan waqti xun soo qaatay caruurnimadeyda, laakiin Maya marka lala bar bardhigo dad badan oo Magaaladeena joogay.
Alves reerkiisa ayaa ahaa cida kaliya uu TV u yiilay xaafada oo waliba ahaa mid aad u duq ah.
“Wuxuu ahaa TV Duq ah oo Todobaatameeyadii, Aabahey ayaa duubi jiray Anteenada si uu u soo qabto Kanaalada.
“Muuqaalku wuxuu ahaa mid cawiran, balse wuu shaqeeyay marka laga reebo maalmaha Daruuraha jiraan.
“Aabahey wuxuu ahaa shaqsi ku waalan kubbada cagta, taasina waa sababta uu TV-gaasi yar ugu ahaa wax kasta.
“Waan xusuustaa intii lagu guda jiray koobkii adduunka ee 1994, gurigeena wuxuu ahaa bartanka Adduunka, Bil ayaa la xiray wadanka oo dhan qofkasta oo magaaladeena joogana wuxuu lahaa meel uu kulamada ka daawado.
“Sidaa darteed qofkasta gurigeena ayuu yimid, kaa oo noqday garoon yar oo kubbad cagta ah.
“Bal suureyso 50 ruux oo isugu yimid Taleefishin yar, qeylinaya isla markaana dabaal degaya.
“Marka uu kulanku bilowday, waxay ahayd sida inaan garoon dhab ah dhex joogno, ma aynaan daawaneyn oo kaliya kulanka, waan ciyaareynay, waad garaneysaa waxaan ula jeedo.
“TV yar ayaan ka daawaneynay Cafu iyo Romario, marka ay weerar tagaan, kooxda ayaan la weerareynay, marka ay difaacanayaanna waan la tifaactameynay, faraha ayaan is dhaafsaneynay, qal qal, dhidid, sida inaan si dhab u ciyaareyno.”.
Chelsea oo Bartilmaameed ka Dhigatay Macalinka Tottenham
Arsenal oo Diirada Saaratay Daafaca Kalidou Koulibaly Suuqa Xagaaga